Ma rabtaa inaad si wax ku ool ah ula xiriirto oo aad u taageerto shirkad, summad, wax soo saar ama noocyo kala duwan oo ku saabsan warbaahinta dhijitaalka ah? Suuq geynta waxyaabaha ayaa fure u ah hawlgelintaada. Iyada oo la adeegsanayo Didier Mazier, naftaada ku tababar naftaada aasaasiga ganacsiga isla markaana dhis istaraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha la doonayo in lagu soo jiito dhagaystayaasha bartilmaameedka ah. Maareynta qorsheynta oo aad u hagaajiso soosaarka maaddooyinka adoo qeexaya ujeeddooyinka iyo faallooyinka isgaarsiinta. Naqshadeyso oo qor ...
Astaamaha aasaasiga ah ee suuqgeynta waxyaabaha Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Socdaalka bilowga: Faham wax walba oo ku saabsan bilowga 3 saacadood
horeAasaaska Google Analytics
socdaShaqo-bixiyeyaasha shaqsiyeed: deynta canshuurta degdegga ah waxay ka bilaabataa Paris iyo Waqooyiga